कति विश्वास गर्न सकिन्छ साहस उर्जाको संस्थापक शेयरमा लगानीका लागि !! जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
कति विश्वास गर्न सकिन्छ साहस उर्जाको संस्थापक शेयरमा लगानीका लागि !!
जनबोली/ १५ चैत, काठमाडौ । ८६ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै साहस उर्जा लिमिटेडले सर्वसाधारणबाट ब्यापक रुपमा पैसा उठाउने तयारी गरेको छ । बिद्युत उत्पादन सम्झौता भएको देखाउँदै कम्पनीले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी ब्यापक रुपमा लगानी गर्न आब्हान गरेको छ, जब कि कम्पनीले आयोजना निर्माणको काम नै सुरु गरेको छैन । आयोजना निर्माण कार्य नै सुरु नगरेको कम्पनीले प्राथमिक शेयर निश्काशन ( आर्यपीओ) जस्तो गरी रकम लगानीका लागि आम सर्वसाधारणमा आब्हान गरेको हो ।
सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुले लगानी गरेको साहस उर्जाले नेपालकै ईतिहासमा हालसम्म निजीस्तरमा ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । झण्डै १० अर्बको लगानीमा बनाईने जलविद्युत आयोजनाका लागि बित्तीय स्रोत जुटाउने क्रममा देशभरिका सर्वैसाधारण र कम्पनीहरुलाई प्रोमोटर बनी योजना निर्माणमा सघाउन आब्हान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एक कम्पनी र एक परियोजनाको नारा अघि सार्दै यो आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । कम्पनीले यसअघि गुल्मीमा पाँच मेगावाटको हुग्दीखोला जलविद्युत आयोजना र्मिाण गरी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ ।
कम्पनीले विद्युत विकास बिभागबाट उत्पादन अनुमति लिई प्राधिरकणसँग पीपीए गरेर आयोजना स्थलमा पहुँचमार्ग बनाईरहेको छ । आगामी भदौबाट आयोजना निर्माण गर्ने सोचमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संस्थापकहरुबाट लगानी जुटाउने र बैंकहरुबाट ७ अर्ब ऋण लिने सोच बनाइृएको साहस उर्जाले जनाएको छ । ब्यत्तिगत रुपमा एक लाखदेखि पाँच करोडसम्म र संस्थागत रुपमा पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्दता जाहेर गरी हाल ६० प्रतिशत रकम र छ महिना भित्र बांकी ४० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारणबाट सं्रकलन हुने रकम बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने र ऋण प्रयोजनका लागि जम्मा भएको रकमलाई लकअप गरिने भएकाले दुरुपयोग नहुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनालाई निर्वाध रुपमा संचालन गर्न आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि पनि मागे जति शेयर दिने योजना कम्पनीले बनाएको छ ।
कम्पनीका संस्थापकहरुमा बैकिङ र सहकारी क्षेत्रका नाम चलेका ब्यक्तिहरु भोजबहादुर शाह, मिनराज कंडेल, परितोष पौडेललगायत छन् । यस आधारमा हेर्दा कम्पनीमा संस्थापकको रुपमा लगानी गर्दा धेरै जोखिम नभएको मान्न सकिन्छ । २०१९ भित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पुरा गरी बर्षेनी ३६ प्रतिशत लाभांश दिने योजना कम्पनीले बनाएको छ । यसरी संस्थापक शेयरमा गरिएको लगानी रकम उठाउन भने तीन बर्षपछि मात्र शेयर बेच्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।